Frenulum Gaaban oo Ragga ah - Talooyin Caafimaad oo loogu talagalay Ragga Qaaliga ah | Ragga Stylish
Frenulum ga gaaban wuxuu noqon karaa dhibaato weyn ragga qaarkiis, qaasatan kudhaqanka xiriirka galmada ee lagu qanco, markay awoodi kari waayaan inay caado ka bixiyaan cambarka. Waa in si faahfaahsan loo ogaadaa in waqtiga kacsiga madaxa guska ama jaleecayaashu waa inay xor ahaadaan maxaa yeelay maqaarka guska dib ayaa looceliyaa si loo ilaaliyo galmada la rabo, hadii uusan ka noqonin ama ay adkaato waa astaamaha buuryada hore ama frenulum gaagaaban taasi waxay ka hortageysaa dib u gurasho caadi ah.
Frenulum-ku wuxuu caawiyaa soo celinta maqaarka maqaarka buuryada laga gooyay joogitaankiisa caadiga ah, oo daboolaya nabarrada marka gusku nasto ama uu ku jiro xaalad jilicsan. Laakiin dad badani ma oga inay haystaan ​​frenulum gaaban taasina waxay u horseedaa kacsi iyo dhibaatooyin xagga galmada ah. Markay timaado cilmigan cilmiga ah waxaa la dhihi karaa"Frenulum gaagaaban" ama "frenulum gaaban".
1 Waa maxay frenulum-ka?
2 Astaamaha lagu garto frenulum-ka gaagaaban
3 Dib u eegista iyo ogaanshaha takhasusle
4 Daaweynta iyo xalka
Waa maxay frenulum-ka?
Frenulum waa isku laab laab maqaar u eg laga helay cirbadaha hoostooda, buuryada hoosteeda, iyo guska hoostiisa. Frenulum-ka wuxuu caawiyaa in lagu ilaaliyo buuryada maqaarka meesha iyo dhaldhalaalka, taas oo markii dib loo laabto waxay kaloo ka caawisaa inay dib ugu noqoto meeshiisii ​​caadiga ahayd.
Aaggan ninka sidoo kale waa "aag erogon oo xasaasiyad weyn leh", tan iyo inta lagu guda jiro galmada qaybtani waxay muujinaysaa raaxo weyn iyo kicinta soo noqnoqota. Taabashadaada oo sii socota waxay kaa caawin kartaa abuurista raaxaysi kordhaysa iyo waxay gacan ka gaysataa fal-celinta shahwada.
Astaamaha lagu garto frenulum-ka gaagaaban
Xaaladaha badankood waxay leeyihiin frenulum gaaban waa cawaaqibka wax hidde, waxaa laga dhaxli karaa qof qaraabo ah. Xaaladaha kale waxaa laga yaabaa inay dhacdo inuu qofku ku dhacay nooc ka mid ah infekshannada. Halkan frenulumka wuxuu gaadhay caabuq daran iyo fibro (dhumucdiis) keenaya a gaabinta frenulum. Ama waxaa laga yaabaa inuu jiray dhaawac ama jabka manhajka mararka qaarkood iyo inta ay bogsanayso waa la soo gaabiyey.
Qofka la ildaran frenulum-ka gaagaaban badanaa wuu dareemaa xanuunka siigaysiga iyo galmada. Haddii frenulum-ka uu aad u gaaban yahay xaalado badan wuxuu abuuri karaa raaxo-darro aad u badan oo u horseedi karta awood-darro. Xaaladaha kale ilmada ayaa sababi kara Waxay ku xanuunsadaan xitaa iyagoo keenaya dhiig bax.
Dib u eegista iyo ogaanshaha takhasusle
Khabiirka takhasuska u leh dib u eegista iyo qiimeynta wuxuu noqon doonaa aqoon yahan cilmu-yaqaan kaadi yaqaan, ayaa noqon doona midka sida ugu wanaagsan kuu siin kara qiimeyn iyo daaweyn guul leh oo noocaan oo kale ah. Baadhitaan ayaa lagu samayn doonaa aagga uu dhakhtarku ku nuuxnuuxsan karo aagga isla markaana ku samayn karo dhaqaaqa foorashada maqaarka isagoon ku qasbin. Halkan waxaad ka hubin doontaa shaqada saxda ah ee maqaarka hore iyo haddii aad u baahan tahay nooc kasta oo faragelin ah.
Daaweynta iyo xalka
Xaaladaha khafiifka ah waxaad ku tababbaran kartaa dhaqdhaqaaqyo taxane ah iyo halka frenulum-ka laga siin karo dabacsanaan. Waxay ku lug leedahay ka noqoshada iyo dhaqdhaqaaqyada hore ee buuryada iyadoo la kaashanayo kareemyada corticosteroid yaree caabuqa iyo unugyada dhuuban ee dhuuban. Sidan ayaan ku abuuri doonaa dabacsanaan iyo waa inaad joogteysaa ugu yaraan 4 ilaa 6 toddobaad.
Hawlgalku waa xal kale. Waxay ka kooban tahay samaynta jeexitaan yar oo wareegsan oo ka kooban muruqyada gaaban si looga takhaluso xiisadda. Waxaa lagu sameyn doonaa iyada oo loo marayo a suuxdinta maxalliga ah, iyada oo ku saleysan bukaan-socod iyada oo aan isbitaal la dhigin iyo meesha tolalka laga tolayo si dhaawaca loo xiro. Xaaladaha uu jiro phimosis gudniin baa la samayn doonaa, halkan buuryada gabi ahaanba waa lagaa jari doonaa, iyadoo banaanka soo dhigeysa madaxa muruqyada.
Qalliinka kadib waa inaad adeegsiga xanuun joojiyeyaasha si loo xakameeyo xanuunka. Maalmaha soo socda, daaweyn maalinle ah ayaa la sameyn doonaa ku maydh aagga saabuun iyo biyo iyo marinka povidone iodine. Intaas ka dib, aagga waa in lagu daboolaa faashad si looga fogaado isku dhac.
Dhakhtarku wuu la socon doonaa inta lagu jiro toddobaadyada dambe si daaweyn wanaagsan loo raaco mana jiraan dhibaatooyin dambe sida dhiig-bax, infekshin ama nabar. Ma awoodi doontid inaad galmo sameysid illaa aagga uu gebi ahaanba ka bogsado, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la sugo ugu yaraan afar toddobaad, iyadoo kuxiran isbeddelka qofka.
Waxay ku dhici kartaa xaalado kale marka loo eego ragga doonaya inay galmoodaan galmada oo caqabad ku ah caqabadan (frenulum gaaban) waxay xaalado badan ku abuuri karaan ilmo aagga ama jeexjeexa frenulum-ka. Xaaladahaas, dillaac ayaa dhacda sidaas awgeedna dhiig ama dhiig bax ayaa yimaada. Waqtiyadaas, bogsiintiisu wali way samaysaa frenulum-ka ayaa aad u gaagaaban. Dhakhtarku waa inuu sameeyaa qiimeyn haddii ay lagama maarmaan tahay in qalliin lagu sameeyo ama lagu daaweeyo kareemada corticosteroid. Haddii dilitaankiisu si kama 'ah u dhaco, dib u soo kabashada ayaa u dhaxeysa laba ilaa afar toddobaad, halkaas oo xaaladaha qaarkood laga yaabo in xasaasiyadda la lumiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Frenulum gaaban oo nin ah
Immisa ayey ku kacaysaa helitaanka hilqad?